Afaka Mahazo Famelan-keloka ve Isika? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Nzema Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Tsy hoe sarotra loatra ny miezaka hahazo sitraka amin’Andriamanitra
Milaza ny Baiboly fa mpanota daholo ny olona rehetra. Nandova ota avy tamin’i Adama, ilay lehilahy voalohany, isika ka mora manota. Lasa manao ratsy isika indraindray ary manenina avy eo. Maty ho antsika anefa i Jesosy Kristy Zanak’Andriamanitra, mba hanonerana ny fahotantsika. Afaka mahazo famelan-keloka àry isika noho io sorom-panavotana io. Fanomezana avy amin’Andriamanitra izany.—Vakio ny Romanina 3:23, 24.
Nanao fahotana lehibe ny olona sasany ka lasa misalasala raha hamela azy ihany Andriamanitra. Soa ihany fa milaza ny Tenin’Andriamanitra hoe: “Ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra.” (1 Jaona 1:7) Avelan’i Jehovah foana na dia ny fahotana lehibe aza raha tena mibebaka ilay nanao ratsy.—Vakio ny Isaia 1:18.
Inona no tokony hataontsika raha tiantsika ho voavela ny helotsika?
Raha tiantsika havelan’i Jehovah Andriamanitra ny helotsika, dia tokony hianatra momba azy isika. Mila mahafantatra ny fomba fanaovany zavatra isika, ny toroheviny, ary ny zavatra takiny amintsika. (Jaona 17:3) Vonona hamela ny helok’izay tena mibebaka sy miezaka miova i Jehovah.—Vakio ny Asan’ny Apostoly 3:19.
Tsy hoe sarotra loatra ny miezaka hahazo sitraka amin’Andriamanitra. Fantatr’i Jehovah tsara ny fahalementsika. Tsara fanahy sy mamindra fo koa izy. Tsy tianao àry ve ny hianatra bebe kokoa hoe ahoana no hampifaliana azy?—Vakio ny Salamo 103:13, 14.
Mila mankatò an’Andriamanitra isika. Ampy ve anefa izany raha te ho namany isika?